Home AKUKO UWA Akuko Ala Anyi USAIN BOLT SETIPURU MAKA ORU FOOTBALL NA AUSTRALIA
Usain Bolt nọ na nsochi akara nke a na-ekpe ikpe na Mariners Central Coast nke A-League, ụlọ ọrụ Australian kwuru na Tuesday, dị ka akụkọ akụkọ ahụ na-achụ nrọ ya maka ịgba egwu football.
Ogba agba asatọ na-asọ asọmpi Olympic Bolt, onye dị afọ 31, bụ onye lara ezumike nká na-eme egwuregwu mgbe August World Championship na London, bụ onye na-akwado Manchester United nke nwere ogologo nrọ nke ịgba bọl na-agba.
Onye na-edekọ akụkọ ụwa na 100m na ​​200m zụrụ ya na Stromsgodset na Norwegian na nke gara aga na Borundia Dortmund na March.
Atụmatụ ahụ e mere atụmatụ ga-ahụ ya na-esonye n’ime izu isii n’izu ikpe na-amalite n’ọnwa na-abịa na Mariners base na Gosford, ihe dị ka kilomita 75 (kilomita 47) n’ebe ugwu Sydney, onye isi oche bụ Shaun Mielekamp kwuru.
Ogologo oge nwere ike ịgbaso ma ọ bụrụ na ọ dị mma, ọ gwara onye mgbasa ozi azụmahịa Channel Seven.
Otu onye na-elekọta football, Tony Rallis, onye na-arụ ọrụ na ndị ahịa ahụ, gwara Sky Sports Radio’s Big Sports Breakfast Tuesday.
“Ihe kachasị, ikpe, na akaebe marke ego site n’aka (onye na-achị isi Football Federation Australia),” ka o kwuru, na-agbakwụnye na nkwekọrịta ahụ abụghị onye gimmick.
“Ozugbo FFA bịaghachiri ma sị na ha ga-abụ akụkụ nke usoro ahụ, anyị na-aga ikpe … Nke a bu bloke bụ onye na-eme egwuregwu. A-Njikọ chọrọ dike, anyị wee ghọọ onye isi. ”
Mielekamp kwuru na ụlọ ọrụ ya nọ na-arụ ọrụ na nkwekọrịta ahụ ruo ọnwa anọ ruo ọnwa ise, ma a ka nwere “ọrụ iji mee”.
“Ma mkpịsị aka na-agafe ihe ndị nwere ike igosipụta, mana ihe kachasị mkpa ka anyị na-echere iji chọpụta ma hụ otú ọ ga – esi bụrụ ndị na – agba ọsọ.
“Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, ònye maara? Ọ nwere ike na-egwu na A-Njikọ a oge. ”
Mielekamp kwuru na akụkọ banyere Bolt na arụ ọrụ ya na European egwuregwu ọ na-ekpe ikpe na “mara mma”, nakwa na “oge ọ bụla ọ na-azụ, ọ na-emewanye mkpa”.
“O nwere ezigbo aka ekpe, oge ga-agwa ya ọkwa ọ dị na ya ma ọ bụrụ na ọ dabara na A-Njikọ … ọ ga-abụ nnukwu ma ọ bụrụ na ọ nwere ike igwu egwu ma gaa nke ọma,” ka o kwuru.
“Ọ bụrụ na ọ abata ma ọ bụghị ruo n’ókè, ọ nwere ike inwe mmetụta ọjọọ.”
Bolt ejiriwo okpukpu abụọ eme ihe ebe ọ bụ na ọ na-ewere ọla edo abụọ na Beijing Olympic 2008.
Onye egwuregwu a na-agba chaa chaa nọgidere na-emeri Olympic isii ọzọ
« OKWU OBAMA KWURU NA AFO NARI KEMGBE OMUMU MANDELA » 2019: ADC EKWELE NKWA IJI I WEGHARA OYO
Previous article OKWU OBAMA KWURU NA AFO NARI KEMGBE OMUMU MANDELA
Next article 2019: ADC EKWELE NKWA IJI I WEGHARA OYO